Isikhumulo sezindiza (Grozny - kwedolobha lapho njengoba kuyinto) - iviyo kwemibuso. Namuhla, ukhonza izindiza ezinkulu eRussia, futhi konke kwaqala nge ibhizinisi elincane nesizotha. Kwake kwaba nesikhathi lapho sezindiza okwesikhashana akusetshenziswa. Phakathi naso sonke ingqalasizinda sezindiza labhujiswa phakathi empini. Inkundla yezindiza eziyinkimbinkimbi itholakala ohlangothini enyakatho Grozny.
Isikhumulo sezindiza e Grozny laqala ukusebenza ngo-1938 Ekuqaleni, inkampane eyayinazo zonke kwadingeka kuphela izindiza "U-2" futhi "P-5". Zasezikusa mail kanye wezimpahla msebenzi. Khona-ke waqala ukufeza izindiza wezolimo nezenhlanzeko. Kuze kube ngo-1977, kukhona GDP eyodwa kuphela kwaba - udoti. Ngenxa yalokhu, kungase kuphela ahlale izindiza "IL-14", "NA-10" (24), futhi "LI-2".
Ngemva sesimanje yezindiza kwenziwa, futhi wasungula band Turf yokufakelwa. Ngenxa yalokho, esikhumulweni sezindiza wakwazi ukukhonza liner emoyeni abagibeli ngesivinini. Lokhu ezinwetshiwe kukho ngoba umzila Grozny sezindiza. yigama elisha akuthola - North Airport. ke It alternated izikhathi eziningana kwamanye - Sheikh Mansour.
Ngesikhathi zinqobe Chechen amaqembu ahlomile Airfield nengqalasizinda yayo ezilimele kanzima. Airline lathunjwa amasosha e-September 1991 futhi ubambe iminyaka emithathu. Ngemva kwempi, esikhumulweni sezindiza waqala alulame kancane kancane.
Ngo-2000, Directorate kabusha yendiza yasungulwa. Inhloko yomnyango inkonzo baba Gakaev AV Ngo 1999-2006. evulekile, liye landiswa kakhulu futhi yinde. Kufakiwe amanzi ohlelweni. Ngenxa yalokho kwesikhumulo sezindiza (i-Kubi) wakwazi ukuthatha indiza ezifana "TU-154" futhi "IL-62".
Kuvulwa sezindiza ngemuva nokwakha kabusha
Ngo-2002, uMnyango isiRashiya, kwanqunywa ukuba ukukhiqiza umsebenzi wokuvuselela izakhiwo full-scale wenkampane yezindiza. Nakuba namanje wazala igama North. Ngo-2006 wamiswa kusukela ngosuku lokuqala kokusebenza okusebenzela kuyo Aerodrome emva umsebenzi wokuvuselela izakhiwo zalo. Ngo-2007, Fata wakhipha isitifiketi sokubhaliswa isimo yezindiza kanye ukulungela ukusebenza.
nokubekezelana izinsizakalo izindiza "TU-154 'yaxazululwa ekupheleni konyaka sezindiza. Ngo-2009, le nkampani wathola isimo ngamazwe. Endaweni eduze endaweni airfield esikhathini esiseduze esizayo uhlelo ukwakha 5-ihhotela lezinkanyezi kanye yokupaka izimoto. Evulekile uzobe enwetshiwe mhlawumbe ngezinye 1,100 amamitha. Lokhu kuzokwenza kakhulu bandise izindiza ukuthi ungakwazi ukuthatha airfield.
Manje eyodwa kuphela evulekile ubude 2500 m kanye ububanzi amamitha amane nanhlanu. Strip embozwe asphalt. WFP ukusebenza kuze kube manje Isikhumulo sezindiza (Grozny) angamukela yiluphi uhlobo ezinophephela emhlane esuka izindiza - "Boeing" (737, 757), "AN" (72: 74), "IL-114", "Ayrbus A320 'nezinye izindiza ukuthi ukuxegiselwa efakwe ohlwini. Ngemva ngcono evulekile ke kudingeka ukuthi kube ubude 3600 amamitha. Ngenxa yalokhu, esikhumulweni sezindiza uzokwazi uthathe noma isiphi izimoto emoyeni.
Isikhumulo sezindiza (Grozny) has a esibulalayo umgibeli, has izakhiwo zesimanje ukuze inkonzo ephephile futhi zikhululekile. Njengazo zonke zezindiza amabhizinisi isimo ngamazwe, kukhona nendinganiso amasevisi. Ngaphezu kwalokho, esikhumulweni sezindiza has isevisi ehlukile abagibeli flying nge-business class. Ngenxa yalesi sigaba kukhona isheke ehlukile, imithwalo imvume.
Konke lokhu kwenziwa ngaphandle imicikilisho engenasidingo nokwenza emigqeni. Esikhumulweni sezindiza, kukhona amakamelo aphakeme, lapho abagibeli abakwazi kuphela uphumule, kodwa futhi ukuba babambe izingxoxo e eziklanyelwe kuleli gumbi. Kufakwe wonke amasevisi ehhovisi, ungasebenzisa i-inthanethi khulula.
Kufanele futhi usho isevisi abagibeli abakhubazekile. Ukusevisa a izisebenzi ezikhethekile afanelekayo ekhethiwe. It hhayi kuphela ihlangabezana, kodwa futhi ukuhlela ukuxhasa abantu abangenakukwazi ukuthutha ngokuzimela. Abasebenzisi sabakhubazekile ngesikhathi Aerodrome ifakwe ramps okukhethekile ukunyakaza.
Ngaphandle kusukela kumasevisi angaphezulu namasevisi asebenzisa Igumbi umama nengane isakhiwo. Kukhona izitolo eziningi ezitolo. A ikhefi futhi yokudlela. Kukhona elula car park. Eduze ehhotela ukhululekile.
Kusukela sezindiza, izindiza zenziwa bacondze etindzaweni letehlukene. Ukuze wenze lokhu ukuhlela aviavokzala isakhiwo. Isikhumulo sezindiza (Grozny) uyisa abagibeli ukuba Surgut, Rostov-on-Don nakwamanye amadolobha. Kusukela 2014 ukuba afeze izindiza eziya Simferopol.
Indlela ukuya esikhumulweni sezindiza?
Isikhumulo sezindiza e Grozny engafinyelelwa ezokuthutha zomphakathi. Abaphathi bedolobha ihlelwe imizila njalo sezindiza. Ungathola kukhona ngosizo itekisi.
Orenair: ukubuyekezwa. Orenair - "Orenburg izindiza"
Kuphi futhi nini elusizo kuye ukuthenga ithikithi plane?
Christmas ithoyizi wase-USSR: i ISIFISO kanye izibonakaliso zezikhathi
Kungani ungabonisi yevidyo "Youtube", futhi kanjani ukuyixazulula?
Ingabe izidakamizwa "Kontraktubeks" induna izibazi? Izibuyekezo
Kanjani ukuze uthole isitifiketi umshwalense impesheni? Yini edingekayo ukuze sithole isitifiketi impesheni umshwalense?
Yini uphawu kangcono ngezihluthu amazinyo? Kukhethwa impahla